प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा दुई तिहाइभन्दा धेरैको बहुमत !, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा दुई तिहाइभन्दा धेरैको बहुमत !
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको समर्थन पाएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा ७७ प्रतिशत भन्दा बढी सांसदको मत पाएका छन् ।
आइतबार संसदमा कूल २६८ सांसद उपस्थित थिए । तीमध्ये २०८ सांसदले ओलीको पक्षमा मतदान गरेका हुन् । उनको विपक्षमा ६० मतमात्र परेको थियो । ओलीको विपक्षमा कांग्रेसको मत मात्र परेको छ र बाँकी सबैले ओलीलाई समर्थन गरेका छन् । ओलीले प्रतिनिधिसभामा पाएको मत दुई तिहाइभन्दा पनि बढी हुन्छ । स्मरणीय छ– संसदको दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधनदेखि राष्ट्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने निर्णय गर्न समेत अधिकार पाइन्छ ।